Taariikhda logo Batman: waa kuma iyo calaamadaha ugu muhiimsan ee taariikhdeeda | Hal-abuurka khadka tooska ah
taariikhda logo batman
Carruur ahaan waxaan ku riyoon jirnay geesiyaal sare ama geesiyaal awood leh oo awood u leh inay badbaadiyaan adduunka, oo ay la dagaalamaan cadowgooda ugu xun. Sheekadu ismay beddelin, sababtoo ah sawir-qaadayaal iyo naqshadeeyayaal taxane ah ayaa maalin isu tagay si ay u abuuraan nooc dugsi geesinimo leh, dhammaantoodna leh awoodo kala duwan.
Qaarkood way ka khuseeyeen kuwa kale laakiin waxay ku sii nagaadeen inta lagu jiro taariikhda animation iyo khayaaliga sayniska sida ugu wanaagsan. Qormadan umaanaan nimid inaan kaala hadalno cidda ugu wanaagsan taariikhda, laakiin waxaan filayaa in sawirka aan hordhignay inaad ku ogaan doonto cidda aan ka hadlayno.
Haddii aad taageere u tahay majaajilada DC iyo Batman, nasiib baad leedahay, sababtoo ah waxaan kuu sharxi doonaa sida uu jilaagan ku yimid, oo ka dhigan, calaamadda matalaysa.
1 yaa batman ah
1.1.2 Muuqaalka jirka
1.2 majaajilada dc
2.1 Astaamaha ugu horreeya
2.2 calaamada jaalaha ah
2.3 Waqtiyo badan oo casri ah
3 Jilayaasha kale ee DC
3.4 Booster Dahab ah
yaa batman ah
Xigasho: Maxkamadda Ingiriiska
Haddii ay dhacdo in aad taageere u tahay Marvel-ka marka loo eego DC-ga oo aanad weli garanayn cidda uu yahay Batman, waxaanu ku siin doonaa hordhac kooban oo ku saabsan jilaha si aad u barato qofka ugu horreeya.
Batman waxaa lagu qeexaa inuu yahay mid ka mid ah jilayaasha ugu badan, oo aan lagu xusin wakiilka ugu badan ee buugga majaajilada ee DC. Waxaa la abuuray sannadkii 1939-kii oo ay sameeyeen sawir-qaadayaal taxane ah oo lagu magacaabo Bill Finger iyo Bob Kane. Muuqaalkiisii ​​ugu horreeyay wuxuu ka dhacay majaajilada Majaajilada Baadhista iyo tan iyo markaas, wuxuu si dhab ah u buuxiyay bog kasta iyo masraxyada filimada adduunka. Ma adka in uu qaldamo maadaama uu haysto shakhsiyad mugdi ah oo gebi ahaanba labbiskiisa ku habboon. Laakiin si aad si fiican u barato isaga, waxaanu doonaynaa inaan ka faalloonno astaamo taxane ah oo ku saabsan Batman oo laga yaabo inay ku xiiseeyaan oo ay hubaal tahay inay kugu hogaamin doonaan isaga si dhakhso badan.
Sida aan kor ku soo sheegnay, Batman waxay ilaalinaysaa shakhsiyad madow oo gebi ahaanba. Marka aan ka hadalno wax mugdi ah waxaan ula jeednaa in uu leeyahay awood adag, dagaalyahan iyo dabeecad aan laga adkaan karin. Taariikhda oo dhan, waxaa loo muujiyey inay tahay feejignaan ka dhan ah sharkeeda ugu cabsida badan.
Caadi ahaan waa dabeecad halis ah, waligeen ma arag isaga oo faraxsan ama majaajillo ah. Inkasta oo dhammaan khatartan oo dhan, waxaa loo muujiyaa sida dabeecad leh raxmad maadaama uusan muujin wax xumaan ah hortiisa jilayaasha kale. Doorkiisa ugu weyn waa kan hogaamiyaha. sidaa awgeed waxa ay noqotay xidigta majaajilada oo dhan.
Marka laga hadlayo muuqaalkiisa jireed, waxaan xooga saaraynaa Batman waxa lagu qeexaa nin dheer oo akhlaaq leh, waxa uu ku ilaaliyaa madmadow iyo madmadow hor leh dabeecad kasta oo kale oo la socota. Caadi ahaan waxa uu ku labisan yahay cawl oo leh nooc calaamad ah oo leh fiidmeer isaga u taagan oo ku jira laabtiisa dhexdeeda. Waxa kale oo uu xidhan yahay koofiyad madaw oo wajigiisa kala badh ka daboolan timuhuna inta badan waa madow iyo kuwo gaaban oo indho buni ah leh. Marka la soo koobo, muuqaal muuqaal ah oo ka mid ah geesiga sare.
Haddii aad weli la yaabban tahay majaajilada DC waxay yihiin, waxa lagu qeexaa daraasad ama halkii daabace ka soo jeeda Maraykanka oo la asaasay sannadkii 1937. Xarfaha hore ee DC waxay tixraacaan majaajilada Baaraha, cinwaanka ugu horreeya ee qayb ka ahaa astaanta daabacaha.
Marka la soo koobo, waa mid ka mid ah shirkadaha sheekooyinka sayniska ee ugu fiican adduunka. Oo waxaan heli karnaa jilayaal aad u soo noqnoqda oo muhiim ah sida Batman, Superman, Wonder Woman, The Justice League ama Flash ama Green Lantern laftiisa.
Hadda waxa ay la tartameysaa kooxda kale ee ay xafiiltamaan, Marvel Comics, kaas oo sidoo kale xaruntiisu tahay New York. Ilaa hadda, waxay buuxiyeen tiyaatarada filimada sanado badan.
Astaamaha ugu horreeya
Xigasho: Turbologo logo Maker
Nooca ugu horreeya ee astaanta Batman wuxuu soo baxay 1939-kii isla isla majaajiladii Comics-ka Baaraha. Astaanta waxaa naqshadeeyay qof kale oo aan ahayn Bob Kane oo saamayn wayn ku yeeshay la shaqaynta Bill Finger. Calaamadda koowaad waxaa lagu gartaa naqshadeeda aadka u yar. Tan iyo markii calaamadda lafteedu ay ka soo bilaabatay saldhigga ah in ay tahay fiidmeer madax yar leh oo dhego isdabajoog ah ay ku hareeraysan yihiin oo ay baalashu ka muuqdeen kuwo aad u ballaaran. Shaki la'aan mid ka mid ah noocyada ugu fudud.
calaamada jaalaha ah
Kadib 25 sano adoo isticmaalaya calaamada ugu yar ee fiidmeerta. Sannadkii 1964-kii, daabacaha Julius Schwartz iyo Carmine Infantino ayaa dib-u-qaabeeyay labada suud iyo calaamadda cusub. Sidan, calaamadii hore ee uu naqshadeeyay Bruce Wayne waxay qaadan doontaa qaab cusub oo ay weheliso asal jaale ah. agagaarka sawirka xayawaanka oo si aad ah u tilmaamaya.
Saamaynta dib-u-habayntan cusub ayaa ahayd mid aad u weyn oo gaadhay caannimadiisa ugu badan, taageerayaashuna waxay bilaabeen inay aad iyo aad u xiiseeyaan waxa ku dhici doona dabeecadan. Sidan, calaamadda cusubi waxay ka gudubtay kumanaan iyo kumanaan shaashad.
Waqtiyo badan oo casri ah
Calaamadda Carmine waxay sii shaqaynaysay 34-ka sano ee soo socda. Laakiin markii uu dhawaan yimid majaajilada cusub ee Batman, astaanta Batman ayaa mar kale la qaaday iyada oo aan lahayn asalka jaalaha ah ee isaga si aad ah u tilmaamaya. Waxay ahayd nooc cusub oo ay naqshadaysay Batsy oo ka soo muuqday mid kasta oo ka mid ah laqabsiga filimada kala duwan ee jilayaasha, kaas oo Christopher Nolan uu masuul ka ahaa naqshadaynta.
Shaki la'aan, waxaan shaki ku jirin in ilaa hadda, Astaanta Batman waxay soo martay isbeddello muhiim ah taariikhda oo dhan, iyo waxa ugu fiican ayaa ah in tani aysan halkan ku dhammaan.
Waqtiga xaadirka ah, Waxa jira in ka badan 30 calaamadood oo gebi ahaanba kala duwan oo ka mid ah summada Batman. Mid kasta oo iyaga ka mid ah waxaa lagu dhaleeceeyay tiro badan oo taageerayaasha iyo xubnaha majaajilada DC. Laakiin shaki la'aan, in ka badan 30 calaamadood oo jira, waxaa jira mid si buuxda u soo baxay. Oo waxay ahayd shaki la'aan calaamadda loo isticmaalo marxaladda Dib-u-dhalashada ee Batman, maadaama ay si fiican ula qabsatay midabka jaalaha ah ee asalka ah waxayna u rogtay calaamad xarrago leh oo xuduudeeda ah, iyada oo aan shaki ku jirin naqshad cajiib ah.
Jilayaasha kale ee DC
Demon waa mid ka mid ah jilayaasha ka tirsan DC. Magaciisa gaarka ah waa Etrigan sidoo kale loo yaqaan The Demon. Waa jilaa uu sameeyay Jack Kirby. Dabeecadda waxaa lagu gartaa inuu yahay jinni ay ku xeeran yihiin dabeecado wanaagsan. Waxa uu leeyahay awoodo la mid ah sida kartida dib u soo celinta, awoodo leh sixir iyo telepathy gaar ah iyo sidoo kale aan dhiman karin, isaga oo ka dhigaya mid ka mid ah jilayaasha ugu fiican.
Superwoman waxaa lagu qeexaa inay tahay geesiyad sare oo ka mid ahayd oo la socotay majaajillo badan oo DC ah. Nooca ugu horreeya ee iyada ayaa soo baxay sannadkii 1943. Magaceeda iyo labbiskeeda waxay la mid yihiin Superman's. Tan waxa u sabab ah isbeddel yar oo ku yimid sheekada buugga majaajillada. Waa jile awoodiisu ku salaysan tahay in tamarta qoraxda loo beddelo tamar elektromagnetic ah, waxa kale oo uu wax ka beddeli karaa oo uu beddeli karaa tamartaas oo uu nuugi karaa. Isagu waa, shaki la'aan, dabeecad saameyn badan ku yeeshay sannadihii ugu horreeyay ee buug-gacmeedka oo sidoo kale waa kan ugu sarreeya sida mid ka mid ah kuwa ugu fiican.
Mera waxaa loo yaqaanaa xaaska Aquaman. Majaajilada DC, iyadu waa geesi weyn oo ninkeeda la dagaallama waxayna ku sifoobaan inay wadaagaan awood isku mid ah. Waxay isu haysataa inay aad uga xoog badan tahay oo ay waliba awoodo waaweyn leedahay, tusaale ahaan, kartida bogsashada, awood weyn oo u oggolaanaysa inuu baabi'iyo cadawgiisa, waa mid aad u firfircoon oo sidoo kale ah biyaha, wuxuu awood u leeyahay inuu wax ka beddelo biyaha oo uu abuuro waxyaabo burburin kara cadawgiisa. Shaki kuma jiro inuu yahay mid kale oo ka mid ah dadka ugu caansan.
Booster Dahab ah
Kobciyaha Dahabku waa mid ka mid ah jilayaasha saamaynta ugu wayn ku yeeshay ilaa taariikhda majaajilada DC. Sheekadiisu waxay dib ugu noqotaa inuu noqdo ciyaaryahan kubbadda cagta mustaqbalka kaas oo xado nooc ka mid ah giraanta, suunka awoodaha leh iyo robot. Waxa uu mideeyaa dhammaan walxahaas uu xaday oo uu noqday geesi awood leh.
Shaki kuma jiro in uu yahay jilaagii sida aadka ah uga soo dhex muuqday qisadii sheekadiisa iyo horumarkiisa, sidoo kale waxa uu ka mid yahay jilayaasha isbadalka badan sameeyay.
Hubaal waxaad hore u garanaysay qofka Batman yahay ka dib markaad akhrido boostada. Hubaal waxaad la yaabi doontaa sida ay jilayaasha DC u guulaysteen taariikhda oo dhan. Waxaa jira jilayaal badan oo qayb ka ah tifaftirkan, laakiin Batman ayaa had iyo jeer ahaa, oo ay weheliso Superman, kan ugu caansan waayaha cusub.
Geesiyaashan ayaa had iyo jeer nala socon doona ilaa dhamaadka taariikhdooda iyo xitaa kuweena, sidaas darteed waxaa muhiim ah inaad wax badan ka barato jilayaasha oo aad noqoto taageere dhab ah sheekadan sanado badan ku jirtay shaleemada caanka ah iyo majaajilada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » taariikhda logo batman
Barnaamijyada dib u tabashada sawirka ugu fiican